ကြယ်ကလေးရဲ့ အတွင်းဒဏ်ရာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Poetry » ကြယ်ကလေးရဲ့ အတွင်းဒဏ်ရာ	15
Posted by Thint Aye Yeik on Aug 2, 2016 in Poetry | 15 comments
ဂျစ်စူ says: အဲဒါ ဘသူ့ကို ဘာပြောတာ မလား
Thint Aye Yeik says: ဟက်တယ်
အာ့ ဘသူ့ကို ပြောတာ
၀င့်ပြုံးမြင့် says: အတွင်းဒဏ်ရာတွေ ဟာ အပြင်ပနဲ့ သက်ဆိုင်နေတာ အံ့သြဖို့ကောင်း။
Thint Aye Yeik says: ကဗျာ(ကဗျာတို လို့ ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဒီ)စာသားကိုက
အတွင်းဒဏ်ရာ ရထားတဲ့သူတစ်ယောက်ရဲ့ အပြင်ပန်း မာန တင်းခံထားတဲ့ စာသား
may july says: ကြွေ ကျ လာ ရင် တော့
လက် နဲ့ တို့ ထိ ကြည့် မယ် လို့
စိတ် ကူး ရှိ ..။ ငိငိ
Thint Aye Yeik says: ငင့်
kai says: ကြယ်ကြွေတယ်ဆိုတာ.. အာကာသထဲက.. အမှိုက်တွေ ကမ္ဘာမြေထဲအ၀င်…. လေထုပွတ်တိုက်အားကြောင့်… မီးလောင်ကျလာတာ…။
အဲဒီကြွေကြယ်လေး.. ကမ္ဘာမြေကိုထိကျန်ရင်တော့.. ဈေးတော်တော်ကြီးကြီးနဲ့ ရောင်းလို့ရသဗျ..။
Thint Aye Yeik says: ဒါဖြင့်
.ကြယ် ကြွေတာမြင်ချိန်မှာ ဆုတောင်းရင် ပြည့်တယ် ဆိုတော့ကာ. . .
ဒီတစ်ခါ ကြယ်ကြွေတာ မြင်ရင်”ငါ့ရှေ့ ကျ လာစမ်းပါစေ”လို့ ဆုတောင်းပစ်မယ်
မမချွိ says: ဒီ စာသားကို သိပ်ကြိုက်တာပဲ။
ဘာလို့မှန်းမသိ စစဖတ်ချင်းကို စိတ်ထဲရောက်လာတာ။
Thint Aye Yeik says: ၂၉ နှစ်အရွယ်
မာနတစ်ခွဲသားနဲ့ ခပ်ချေချေ. . .
အခုတလော တစ်ပိုဒ်ထဲ အဲ့လိုစာသားလေးတွေ ရေးချင်နေတယ်။
သဘောကျတယ်ဆိုလို့ ဝမ်းသာပါတယ် မမဂျွီး
Foolish Girl says: မာနနဲ့အချစ်တိုက်ပွဲဖြစ်ကြတယ်
Thint Aye Yeik says: .ကောင်းလှချည်လားဗျို့… စကားလုံး သုံးပုံ…
Foolish Girl says: Thint Aye Yeik ကိုမမှီပါဘူးဗျာ….
Thint Aye Yeik says: ကျနော်က အခုမှ လက် သွေးတုန်းပါဗျား…
Foolish Girl says: ခံစားချက်ခြင်း ထပ်တူညီလို့ဖြစ်မှာပါ :D